फिचर | लगातार समाचार ::: lagatar news
वातावरण संरक्षणका लागि अविच्छिन्न यात्रामा वे ग्रुप नेपाल
सुरूका दिनहरूमा वे ग्रुप भनेर समाजमा चिनाउनै सकस थियो। तर, अहिले सरसफाइको प्रसंग चल्दा वे ग्रेप भनेर नाम लिन स...
मुस्ताङ विमान दुर्घटनाले शोकमग्न धनुषा : गाउँको रानो नै गयो
'विमान हराएको खबर फैलियो, आइतबार दिनभरि हामी मकर सरलगायत सबै आफन्त सकुशल भेटिउन् भन्ने प्रार्थना गरी रह्यौँ, त...
बजेटका २० नारा र अभियान
किसानलाई कृषि सहकार्य समूह र सहकारीमा सङ्गठित गरी उपलब्ध खेतीयोग्य जमिनका साथै बाँझो जमिनको उपयोग गरी कृषि उत्...
निर्वाचनमय बन्यो मुलुकको वातावरण
कामका सिलसिलामा टाढाटाढा पुगेका सर्वसाधारण मताधिकार प्रयोगका लागि आतुर छन्। उनीहरू वैशाख ३० को प्रतीक्षामा छन्...
ठाडो भाका र बत्ती कर्पुटारका विशेषता
पश्चिम नेपालमा निकै लोकप्रिय छन्। लोकसाहित्यअन्तर्गतको महत्वपूर्ण विधाका रुपमा रहेको ठाडा भाकाका गीत पश्चिम ने...
लुम्बिनी प्रदेश सरकार परिवर्तनसँगै प्रदेशसभाका गतिविधि शून्यप्रायः छन्। स्थापनाको पहिलो र दोस्रो वर्षमा कानुन...
गाउँ–सहर सडक सञ्जालले जोडिँदै
दिलकुमार लिम्बू, फुङ्लिङ, माघ १९ । मिक्वाखोला गाउँपालिकाकी भगिमाया लिम्बू अहिले ७७ वर्षमा प्रवेश गरिन्।
२४ जेष्ठ २०७९, मंगलवार १०:४९
सुरूका दिनहरूमा वे ग्रुप भनेर समाजमा चिनाउनै सकस थियो। तर, अहिले सरसफाइको प्रसंग चल्दा वे ग्रेप भनेर नाम लिन सक्ने भएको छ। गएको ६ वर्षको प्रतिफल हो यो। समूहले आफैँ सरसफाइ गर्दै हिँड्ने मात्र...	Read more
१७ जेष्ठ २०७९, मंगलवार ०७:५८
'विमान हराएको खबर फैलियो, आइतबार दिनभरि हामी मकर सरलगायत सबै आफन्त सकुशल भेटिउन् भन्ने प्रार्थना गरी रह्यौँ, तर दैवलाई यो हाम्रो पुकारा मञ्जुर रहेनछ', सोमबार दुर्घटनाग्रस्त विमान भेटिएर यात्...	Read more
१६ जेष्ठ २०७९, सोमबार ११:००
किसानलाई कृषि सहकार्य समूह र सहकारीमा सङ्गठित गरी उपलब्ध खेतीयोग्य जमिनका साथै बाँझो जमिनको उपयोग गरी कृषि उत्पादन बढाउने योजना छ। कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धिका लागि यस क्षेत्रको व्यावस...	Read more
१३ बैशाख २०७९, मंगलवार २१:२३
कामका सिलसिलामा टाढाटाढा पुगेका सर्वसाधारण मताधिकार प्रयोगका लागि आतुर छन्। उनीहरू वैशाख ३० को प्रतीक्षामा छन्। बजार, चोक, गल्ली, चौतारा, चिया पसल, होटल तथा टोललाई पनि चुनावले झपक्कै छोपिसके...	Read more
६ फाल्गुन २०७८, शुक्रबार १३:४१
पश्चिम नेपालमा निकै लोकप्रिय छन्। लोकसाहित्यअन्तर्गतको महत्वपूर्ण विधाका रुपमा रहेको ठाडा भाकाका गीत पश्चिम नेपालको पहिचान हो।	Read more
२१ माघ २०७८, शुक्रबार १२:४५
लुम्बिनी प्रदेश सरकार परिवर्तनसँगै प्रदेशसभाका गतिविधि शून्यप्रायः छन्। स्थापनाको पहिलो र दोस्रो वर्षमा कानुन निर्माणमा सक्रियता देखाएको प्रदेशसभा यस वर्ष निष्क्रिय छ।	Read more
१९ माघ २०७८, बुधबार १२:२३
दिलकुमार लिम्बू, फुङ्लिङ, माघ १९ । मिक्वाखोला गाउँपालिकाकी भगिमाया लिम्बू अहिले ७७ वर्षमा प्रवेश गरिन्।	Read more
तालिममा सहभागी भएर सफलता पाएपछि अहिले अरूलाई सिकाउन पनि दक्ष भएकी छिन् भरतपुर–४, लंकूकी इन्दिरा सापकोटा। आफूले जानेको सीप सिकाउन पाउँदा खुसी लागेको उनी बताउँछिन्। सहभागीबाट पनि चासो र जिज्ञा...	Read more
भान्छेको पनि कहाँ आफ्नो कथा हुन्छ र? तर, करिब चार दसक भान्छाकै काम गरेका बालकृष्ण अर्यालको अनुभव नै उनको सफलताको कथा बनेको छ।	Read more
शिखर नगरपालिका–१ कपल्लेकीकी ४१ वर्षीया महिसरा दडिमानाका श्रीमान् टेकबहादुर कमाउनका लागि २० वर्ष पहिले भारतको जोधपुर गए।	Read more
राजापुर, मंसिर १९ । वर्षाभरि मेहनत गरेर लगाइएको धानबाली भित्र्याउनै लाग्दा बाढीले बगाएर लगेपछि बर्दिया, भदालीटोलका गर्वु चौधरी निकै चिन्तित छन्।	Read more
गोपालप्रसाद बराल, महोत्तरी, मंसिर १५ । विवाहपञ्चमी नजिकिनासाथ भङ्गाहा नगरपालिका–४ पलार बस्तीकी सियानकीदेवी बाँतरलाई रेल चढेर जनकपुर जाने रहर जाग्छ।	Read more
सरकारको नेतृत्वकर्ताबाट प्रमुख प्रतिपक्षी दल बने पनि मुलुकको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको एक सहयात्री नेकपा ९एमाले० राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रविन्दुमै छ। ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय...	Read more
रामचन्द्र न्यौपाने, डोल्पा, कार्तिक २५ । हिमाली जिल्ला डोल्पा मोटरसाइकल ‘ट्रेक’को प्रमुख गन्तव्य बन्न थालेको छ।	Read more
बहकिन्छु म सन्तापले सल्केर आगो जल्दछु, खालि भएर शून्यझैँ यहाँ खण्डहरझैँ जिउँदछु, मेरा सारा सारा भावलाई आकाश मेरो भन्दछु, तर मोहलाई म के भनूँ, तिमी भन्दछौ यो भार हो। Read more
सुशीला रेग्मी, रामपुर, कार्तिक १५ । ढकमक्क फुलेका सयपत्री फूल देख्दा कस्को पो मन लोभिदैन र ? घरका आँगन वरिपरि, बगैँचाभरि फुलेका फूलले सौन्दर्य मात्र नभई तिहारको चहलपहल बढाएको छ।	Read more
पुरा हुँदै विद्युतीय चुल्होमा खाना पकाउने नेपालीको सपना
१३ कार्तिक २०७८, शनिबार १३:४२
काठमाडौँ, कार्तिक १३ । नेपालीका लागि विद्युतीय चुल्होमा खाना पकाउने विषय एकाध वर्ष पहिले एउटा दन्त्यकथा जस्तै थियो। बिजुलीको सहज उपलब्धता थिएन।	Read more
७ कार्तिक २०७८, आईतवार १३:३४
पेमा लामा, बनेपा, कर्तिक ७ । पहिला खाली रहेको धुलिखेल नगरपालिका– ९ देवीस्थानको नाङ्गो डाँडामा अहिले घोडचडीका साथै पिङको मज्जा लिने पर्यकटकको घुइँचो बढ्न थालेको छ।	Read more
२० भाद्र २०७८, आईतवार ०५:३४
हेलम्बु । चरक्क चर्किने घाम पहाडका केही थुम्कालाई छेल पारेर बसेको कुहिरो, उक्त पहाडको बीचबाट बग्दै गरेको मेलम्ची खोला।	Read more
११ श्रावण २०७८, सोमबार ११:०८
प्रकाश अधिकारी, कर्णाली, साउन ११ । स्थापनाको दुई वर्षसम्म सत्तापक्ष–प्रतिपक्ष सहकार्यको अनुपम नमूना देख्न सकिन्थ्यो कर्णाली प्रदेशसभामा। प्रदेशसभाको रोष्टममा उभिएर प्रमुख नेताहरु भन्ने गर्थे...	Read more